Suuqgeynta U Dhawaanshaha: Waa maxay? Waa noocee?
Isla marka aan u soo baxo silsiladdayda 'Kroger' (supermarket) ee maxalliga ah, hoos ayaan u fiiriyaa taleefankayga oo barnaamijku wuxuu igu baraarujiyaa meesha aan ka soo heli karo koodhkayga Kroger Savings si aan u hubiyo ama aan u furi karo barnaamijka si aan u baadho oo aan uga helo waxyaabaha jidadka. Markii aan booqdo dukaan Verizon, barnaamijkeygu wuxuu igu baraarujiyaa xiriirin si aan u hubiyo kahor intaanan xitaa ka dagin gaariga.
Kuwani waa laba tusaale oo waaweyn oo ah kor u qaadista khibrada isticmaale ee ku saleysan xad -dhaaf ah kiciya. Warshadaha waxaa loo yaqaan Suuqgeynta dhawaanshaha.
Ma ahan warshad yar, oo la filayo inay u kororto $ 52.46 bilyan oo doolar sanadka 2022 sida laga soo xigtay Suuqyada Suuqa.
Waa maxay Suuq-geynta u-dhawaanshaha?
Suuqgeynta dhawaanshaha waa nidaam kasta oo adeegsada tikniyoolajiyada goobta si toos ah ula xiriir macaamiisha iyadoo loo marayo aaladaha la qaadan karo. Suuqgeynta udhawda waxay kudari kartaa dalabyada xayeysiinta, fariimaha suuq geynta, taageerada macaamiisha, iyo jadwalka, ama istiraatiijiyado kale oo waxqabad oo udhaxeeya isticmaale taleefanka gacanta iyo meesha ay masaafo aad ugu dhowyihiin.
Adeegsiga suuq u dhawaanshaha waxaa ka mid ah qaybinta warbaahinta riwaayadaha, macluumaadka, ciyaaraha, iyo codsiyada bulshada, jeegagga tafaariiqda, albaabada lacag bixinta, iyo xayeysiinta maxalliga ah.
Suuqgeynta dhawaanshaha ma ahan hal teknolojiyad kaliya, waxaa dhab ahaan la hirgelin karaa iyadoo la adeegsanayo dhowr habab oo kala duwan. Mana ku egtahay isticmaalka taleefannada casriga ah. Laptops casri ah oo GPS awood u leh ayaa sidoo kale lagu bartilmaameedsan karaa iyada oo loo marayo tiknoolajiyadaha u dhow.
NFC - Goobta taleefanka waxaa go'aamin kara isgaarsiinta u dhow (NFC) karti u leh taleefanka isku xiraya qalabka RFID ee sheyga ama warbaahinta. NFC waa tikniyoolajiyadda loo geeyay Apple Pay iyo tikniyoolajiyada kale ee lacag bixinta laakiin kuma eka inay ku egtahay lacagaha. Matxafyada iyo taalooyinka, tusaale ahaan, waxay rakibi karaan aaladaha NFC si ay u bixiyaan macluumaad dalxiis. Dukaamada kaladuwan ayaa NFC dul dhigi kara khaanadaha macluumaadka wax soo saarka. Waxaa jira tan oo fursad suuqgeyn ah oo leh tikniyoolajiyadda NFC.
Iskudhinta - Markaad ku dhaqaaqdo taleefankaaga, isku xirnaanta taleefankaaga gacanta waxaa lagu maareeyaa inta u dhexeysa munaaradaha. Nidaamyada suuqgeynta farriinta qoraalka ayaa ka faa'iideysan kara goobtaada si aad ugu riixdo farriimaha qoraalka kaliya aaladaha ku jira gobol gaar ah. Tan waxaa loo yaqaan SMS Geofencing. Ma ahan tiknoolajiyad sax ah, laakiin waxay faa'iido u yeelan kartaa in la hubiyo in farriintaada loo diro oo keliya dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee aad u baahan tahay waqtiga aad rabto.
Bluetooth - Meelaha tafaariiqda ayaa ka faa'iideysan kara qalabyada taasi waxay ku xirmi kartaa taleefankaaga casriga ah. Caadi ahaan waxaa jira codsi moobiil ah oo awood u siinaya tikniyoolajiyadda iyo rukhsad la codsado. Waad ku riixi kartaa waxyaabaha ku dhex jira Bluetooth, waxaad uga adeegi kartaa shabakadaha maxalliga ah WiFi, u isticmaal barta iftiinka barta internetka, waxaad u adeegsan kartaa sida bog furan, waxaad siisaa adeegyo is-dhexgal ah, waxaadna ku shaqeyn kartaa iyada oo aan lahayn isku xirnaanta internetka.
RFID - Waxaa jira teknoolojiyad kala duwan oo adeegsata mowjadaha raadiyaha si loo aqoonsado walxaha ama dadka. RFID waxay ku shaqeysaa iyadoo lagu keydinaayo nambarka taxan aaladda tilmaamaysa shay ama qof. Macluumaadkan waxaa lagu dhejiyay microchip ku xiran anteeno. Tan waxaa loo yaqaan 'RFID tag'. Chip wuxuu u gudbiyaa macluumaadka aqoonsiga akhriste.
Aqoonsiga dhawaanshaha - Kuwani waa kaararka dhawaanshaha ama kaararka aqoonsiga ee aan lala xiriirin karin. Kaararkaani waxay adeegsadaan anteeno gundhig ah si ay ula xiriiraan qalabka wax ku qaata ee masaafo ahaan u jira dhowr inji. Kaararka u dhawaanshaha waa aaladaha akhrinta oo keliya waxaana badanaa loo isticmaalaa kaararka amniga ee albaab looga soo galo. Kaararkaani waxay hayn karaan xog kooban.
Shirkadaha doonaya inay horumariyaan barnaamijyadan waxay ka faa'iideystaan ​​barnaamijyada moobiilka ee ku xiran, oggolaansho, goobta juqraafiyeed ee qalabka mobilada. Marka barnaamijka mobilada uu ku soo dhaco goob juqraafiyeed oo gaar ah, markaa tiknoolajiyada Bluetooth ama NFC ayaa tilmaami kara goobtooda halka farriimaha lagu kicin karo.
Suuq-u-dhowaanshaha Markasta Uma Baahna Barnaamijyo Qaali ah iyo Teknoolojiyadda Geocentric
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka faa'iideysato suuq-u-dhowaanshaha iyadoo aan la helin tiknoolajiyad oo dhan… waad awoodi kartaa!
Xeerarka QR - Waxaad ku soo bandhigi kartaa calaamado meel gaar ah oo ay ku taal lambar QR ah. Markuu booqdehu adeegsado taleefankooda si uu u baadho lambarka QR, waad ogtahay sida saxda ah meesha ay ku yaalliin, wuxuu u gudbin karaa farriin suuqgeyn ku habboon, oo u fiirso dhaqankooda.
Goobta Wifi - Waxaad soo bandhigi kartaa barta wifi ee bilaashka ah. Haddii aad waligaa gasho xiriir diyaaradeed ama xitaa Starbucks, waxaad goob joog u ahayd waxyaabaha suuqgeynta firfircoon ee si toos ah ugu riixay isticmaaleha adeegsiga shabakadda internetka.
Ogaanshaha Browser Mobile - Ku dar dhul-qoondeynta websaydhka shirkaddaada si aad u ogaatid dadka isticmaalaya Browser-ka Moobaylka goobtaada. Waxaad markaa kicin kartaa popup ama waxaad u adeegsan kartaa waxyaabo firfircoon si aad u beegsato qofkaas - haddii ay ku jiraan ama aysan ku jirin Wifi-kaaga. Khasaaraha kaliya ee tan ayaa ah in isticmaaleha la weydiin doono ogolaansho marka hore.
Amaah Xulasho waxay u diyaarisay macluumaadkan muuqaal guud ahaan Suuqgeynta u Dhaw ee shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah (SMEs):
Tags: xayawaanBluetoothsuuq geynta Bluetoothamaahda xulashadageofencingmeelayntasuuqgeynta kulkululdegsiimo heer sare ahxad -dhaaf ahsuuq geynta hyperlocaljeexjeexaganacsi dhexdhexaad ahdaalacashada mobiladadhow isgaarsiinta goobtaNfcsuuq u dhowaanshahatirakoobka suuq-geynta dhawaanshahaXeerarka QRshirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahganacsiga yaryarSMEwaa maxay suuq u dhawaanshahawifi hotspot
Suuqgeynta Ku-saleysan Goobta: Geo-Fencing iyo Beacons
Febraayo 4, 2016 saacadu markay tahay 9: 30 AM
Xalka suuq galka ku saleysan dhawaanshaha, wuxuu ku siin karaa macaamiishaada khibraddaas gaarka ah ee gaarka ah, dukaameysiga
Feb 19, 2016 markay ahayd 5:40 PM
Nice Blog ayaa ku mahadsan liistada xulashooyinka kala duwan. Waxaan la yaabay sida ay mid waliba ugu ciyaareen meeshan. Ma dhacdaa inaad ogaato halka aan ka heli karo liistada ugu sarreysa tiknoolajiyadda Suuqgeynta agteeda? Waxaan si gaar ah u raadinayaa farsamada Bluetooth.